इजलाशमा चोलेन्द्र आक्रोशः तपाई धम्कि दिन आको, ओली र हरिकृष्णको स्वार्थ बाझिँदैन् ! – SaipalNews.com
काठमाडौं १० पुष । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट उपर संवैधानिक इजलाशमा शुक्रवार सुनुवाई भयो । प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको लिखित कारण मागेका छन् ।
अदालतको कारवाही सुरु भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता डा। दिनेश त्रिपाठीले भने–‘हरिकृष्ण श्रीमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो । अहिले केपी शर्माकै सिफारिसमा संसद विघटन भएको मुद्धा हरिकृष्ण श्रीमानले पनि सुनुवाई गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ, उहाँको निष्ठामा मलाई शंका छैन, तर स्वार्थ बाझियो भने राम्रो सन्देश जाँदैन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले हरिकृष्णको बचाउ गर्दै जवाफ दिए, ‘त्यस्तो कुरा गर्न थाल्नुभो भने अन्तिममा म मात्रै बाँकी रहन्छु, यद्यपी तपाइले कुरा मैले स्विकार्न सक्दिनँ ।’ महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँग एउटै ल फर्ममा अभ्यास गरेका न्यायाधिश हुन् हरिकृष्ण कार्की ।
उनी प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन् । तीनै ओली प्रतिवादी भएको मुद्धामा स्वार्थ नबाझिने जबराको जिकिरपछि सबै चुपचाप भए । जुनियर न्यायाधिश राखेर बेन्च गठन गरेको बारे उनलाई कसैले सोधेनन्, ‘श्रीमान यस्तो किन भयो ? तर, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु चिया गफ गर्दै थिए, ‘रोष्टरमा भएका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई सुनुवाईको मौका नदिनु पनि नयाँ अभ्यास देखियो ।